आफ्ना १२ जना छोरा छोरी - chukuprakash | Nepali Lifestyle,Nepali literature,entertainment,Software
Home » चुटकिला » आफ्ना १२ जना छोरा छोरी
आफ्ना १२ जना छोरा छोरी
बिकासजी आफ्नो श्रीमती र आफ्ना १२ जना छोरा छोरी लिएर फ्लिम हेर्नको लागि जादै थियो । चोकमा उभिराखेको पुलिसले बिकासजीलाई कठालो समातेर प्रहरी कार्यालय लग्यो । बिकासजीले अचम्म मानी डराई डराई पुलिस लाई सोध्यो , हैन पुलिस दाई मलाई किन पक्डेर ल्याउनु भएको ? मैले के गल्ती गरेको छु र ? यो सुनेर पुलिसले भन्यो “केही गल्ती नगरेको भए त्यत्रो मान्छेहरुले तिमीलाई घेरी राख्थ्यो त …